Ady & Fifandirana · Jolay, 2018 · Global Voices teny Malagasy
Ady & Fifandirana · Jolay, 2018
Tantara mikasika ny Ady & Fifandirana tamin'ny Jolay, 2018
Kongo (RDC): Antso an-dahatsary hanao fihetsiketsehana
R.D. Kongo 27 Jolay 2018
Nirehitra indray ny fifandirana ao amin'ny Repoblika Demokratikan'i Kongo : folo taona nihenjanana, ady mifanelanelana, ary ny herisetra izay namela ny marikany teo amin'ny vahoaka, izay voatery indray handositra ireo ady .
Ogandà: Fitontonganan'ny isan'ny rajakon-tendrombohitra?
Oganda 27 Jolay 2018
Tsy araka ny niheverana azy tany am-boalohany intsony ny isan'ireo rajako ao amin'ny Valan-javaboaharin'i Ogandà.
India: Sary voalohany tao amin'ny flickr mampiseho ny fipoahana baomba tao Mumbai
Azia Atsimo 26 Jolay 2018
Nalefa tao amin'ny flickr ireo sary nalaina voalohany avy ao Mumbai. Nandefa sary maro avy eny an-dalamben'i Mumbai i Vinu avy ao amin'ny Vinu's Online Cloud. (2008)
Repoblika Demokratikan'i Kongo : Fahafatesan'Ilay Mpiaro Ny Zon'Olombelona, Floribert Chebeya
Afrika Mainty 25 Jolay 2018
Floribert Chebeya, mpitarika fikambanana iray mpiaro ny zon'olombelona ao amin'ny Repoblika Demokratikan'I Kongo, no hita faty ny 2 jona 2010. Ho fanehoankevitra amin'io vono olona io izay niampy habibiana hafa sy fanolanana maro, hetsika maro no nokarakaraina tany amin'ny faritra maro misy ireo Kongoley mpila ravinahitra.
Azia Atsimo 24 Jolay 2018
‘Raha tsy voarakitra izany, dia tsy nitranga': Volavolan-dalàna handràra ny fakàna sarimihetsika sy ny sarin'ireo miaramila eo am-perinasa ao Israely.
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 24 Jolay 2018
Mamolavola lalàna mety hametra ny fanehoan-kevitry ny mpikatroka sy ny mpanao gaety mpitsikera ny politikany ao amin'ny faritra Palestiniana doboin'i Israeliana ireo mpanao lalàna Israeliana.